I-Airbus yethula iphrojekthi yokuhlomisa nge-A320 eChina
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-China Breaking News » I-Airbus yethula iphrojekthi yokuhlomisa nge-A320 eChina
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • Investments • Izindaba • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Le phrojekthi ikhombisa amandla okukhiqiza wabadlali bezindiza baseChina kanye nokuzibophezela kwesikhathi eside kwe-Airbus eChina.
I-Airbus A320 fuselage yokuhlomisa iphrojekthi yethulwe eTianjin.
Le phrojekthi yingqophamlando entsha ekubambisaneni kweChina neYurophu.
I-fuselage eqediwe izothunyelwa e-Airbus A320 Final Assembly Line Asia eTianjin emhlanganweni wokugcina wendiza.
I-Airbus kanye ne- I-Aviation Industry Corporation yaseChina (AVIC) umemezele ukwethulwa kokujoyina kwephrojekthi ye-A320 fuselage yokuhlomisa eTianjin enyakatho neChina.
Iphrojekthi ukwandiswa kwe- Airbus'Ukuthengwa kwezimpahla eChina, okuwuphawu oluyingqophamlando ekubambisaneni kwezimboni phakathi kwe-Airbus neChina, kusho isiqhwaga saseYurophu.
"Lo msebenzi uyingqophamlando ekubambisaneni kweChina neYurophu, kanti futhi kuyisinyathelo esiseduze sokubekwa kwe-Airbus nokuhlangana okuqondile," kusho uMichel Tran Van, isikhulu esisebenza kwa-Airbus China.
Ubuye wengeza ukuthi lo msebenzi ukhombisa amandla okukhiqiza wabadlali bezindiza baseChina kanye nokuzibophezela kwe-Airbus isikhathi eside eChina.
Iphrojekthi yokuhlomisa nge-fuselage ye-Airbus A320 yenziwe yi-AVIC Xi'an Aircraft International (Tianjin) Corporation (AVIC XAT), inkampani ephethwe yi-AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co., Ltd.
I-fuselage ephelele izothunyelwa e-Airbus A320 Final Assembly Line Asia eTianjin emhlanganweni wokugcina wendiza.
Ukulethwa kokuqala kulindeleke ukuthi kuphothulwe kwikota yesithathu kulo nyaka, kufinyelela umthamo wokukhiqiza wanyanga zonke wokuhlomisa ama-fuselages ayisithupha ngo-6 nokuhlangabezana nejubane lokukhiqiza le-Airbus Final Assembly Line eTianjin, ngokusho kwe-AVIC XAT.